5 Usuku Uhambo Kusukela eRoma Ukuze Hlola Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Usuku Uhambo Kusukela eRoma Ukuze Hlola Italy
Rome yidolobha langa, kodwa ngezinye izikhathi isihambi okunxanelayo kancane ezihlukahlukene. Labo uhlale eRoma isikhathi eside ngokwanele ukuze uhlole kungase ufisa ukuba uqalaze ndawo, kakhulu. Ngenhlanhla, yilokho usuku uhambo zingezokunikeza! Uma ucabangela kahle kanjani exhunyiwe eRoma kuyisikhuthazo ngesitimela nazo ezindaweni eziningi, inselele enkulu is ukhetha ukuthi uzoyaphi. Nokho, sizilungisile uhlu ukukusiza wenze lokho kanye. Nazi 5 Uhambo Losuku Oluvela eRoma Ukuhlola i-Italy lokho noma yimuphi umhambi uzoyithokozela!
1. Usuku Lokuvakashela Ukuze Ostia Antica
Ostia Antica kuyinto isiphetho lasendulo emhlabeni 30KM kude eRoma. Emuva ezinsukwini zika-Antiquity, indawo leli dolobha itheku elikhulu waseRoma futhi kunensada ukubona lapha. Ngokwesibonelo, you can take a look at the public baths with beautiful mosaics.
Ngaphezu kwalokho, kukhona inkundla yemidlalo futhi emgwaqweni main. Amanxiwa aqukethe izinsalela amathempeli ambalwa abalulekile, njengalowo anikezelwe Hercules.
Another Day Uhambo eseRoma ukuthi siphakamisa kuyinto Tivoli, eyintandokazi idolobha yokuphunyuka uMbusi waseRoma uHadrian lesibili AD leminyaka. wakha Hadrians Villa kuleli dolobha elihle eseduze, okuyinto wagcina ukuthanda ezingaphezu kuka sokuhlala kwakhe eRoma.
Njengoba oyinhloko ukuphumula endaweni, Hadrians Villa e Tivoli has izingadi kanye imitapo, futhi ekugcineni laba umuzi ngokwawo. Izigodlo namathempeli ziyingxenye ethakazelisayo ukuvakasha, okuzokwenza uhambo lwakho usuku Tivoli kunomvuzo.
3. Usuku Uhambo Kusukela eRoma Ukuze Bracciano
Hop esitimeleni ngemuva kwehora Ukugibela eside eseRoma, futhi ngeke baye bafinyelela Bracciano. Lokhu langa edolobheni medieval ogwini Bracciano Lake unemisebenzi izindawo sipho. Ngokwesibonelo, ungakwazi bezobuka Orsini Odesalchi Castle, which was a residence of many nobles.
Yini ngaphezulu, lokhu inxuluma elinesithunzi wayebuye indawo lapho Katie Holmes washada Tom Cruise e 2006. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi bezobuka lombhishobhi Braccianos, elakhiwa ngesikhathi wenkathi ephakathi.
Alingana nasetshenziswa idolobhana elinabantu eside nokubaluleka okungokomlando, Naples kuyinto kumele uvakashele noma ubani ngifuna ukuzwa Italy futhi ukuthatha Day Uhambo eseRoma. Ukubukwa ayakhiwe ngaphansi kweNtaba iVesuvius, izakhiwo ezimangalisayo, futhi efudumele, abanomusa ezinye izici eziyinhloko edolobheni. Nokho, Naples loke nje lidume ngokuthunga njengoba kwazalelwa pizza Margherita. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela Pizzeria lapho benza pizza yokuqala - Antica Pizzeria PortAlba.
isiphakamiso sethu sokugcina Zosuku Uhambo eseRoma kuyinto Florence, okuyinto kungase kubonakale kancane ikude kakhulu uhambo usuku. Nokho, kuba kalula futhi ngokushesha nge isitimela. futhi nje kokubona mlando, architecturally enchanting maphakathi Florence uyokwenza uhambo kunomvuzo. Duomo di Firence yilona lombhishobhi edumile Florence, okuyinto ibonisa kahle ukubukeka okudala kwe edolobheni. Ukuvakashela Florence ku uhambo day eseRoma kuyindlela enhle ukuze qedani uhambo lwakho.
Konke lokhu ezindaweni eziseduze eRoma nibaluleke ngokuvakashela. Uma ufuna uhambo ephelele usuku, pick ayizintandokazi zakho uhambe. Kuyinto ukuthi lula!
Ulungele adventure yakho Italy? Phathani izikhwama zakho, ukuhlela imisebenzi zakho zokuvakasha, futhi Bhuka zemininingwane lakho Amathikithi ngesikhathi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Usuku Uhambo Kusukela eRoma Ukuze Hlola Italy” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-rome-explore-italy/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)